कहाँ कतिले ल्याए शून्य मत ? कपिलवस्तुका ५ जनाले शून्य मत – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर कहाँ कतिले ल्याए शून्य मत ? कपिलवस्तुका ५ जनाले शून्य मत
कहाँ कतिले ल्याए शून्य मत ? कपिलवस्तुका ५ जनाले शून्य मत
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बहुमतीय प्रणालीमा बढी फाइदा उठाउन दलका उम्मेदवारले ‘डमी’ उम्मेदवार उठाउने गरेको बताए । त्यस्ता उम्मेदवारले निर्वाचनको हरेक स्टेपलाई प्रभावित बनाउने गरेको उनको बुझाइ छ ।
मतदानपूर्व, मतदानका दिन र गणनाका बखतसम्म त्यस्ता डमी उम्मेदवारका कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुन्छ । कानुनले दिएको अधिकारको उनीहरूबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो कानुनको मौन उल्लंघन हो ।